Otu esi agbaji ngọngọ na AutoCAD
Ịmeghe ihe mgbagwoju n'ime ihe dị iche iche bụ ọrụ dị mkpa ma dị mkpa n'oge ịbịaru. Ka e were ya na onye ọrụ ahụ kwesịrị ime mgbanwe na ngọngọ ahụ, mana n'otu oge ahụ ihichapụ ya na ịbịaru ọhụụ bụ enweghị isi. Iji mee nke a, enwere ọrụ nke "ịfụ ọkụ" ahụ, nke na-enye gị ohere idezi ihe dị iche iche nke oghere ahụ iche iche.
AutoCAD: Chekwaa na-abanye na JPEG
Mgbe ị na-arụ ọrụ na AutoCAD, ịnwere ike ịdebe eserese na nchịkọta raster. Nke a nwere ike ịbụ na eziokwu ahụ bụ na kọmputa nwere ike ọ gaghị abụ mmemme iji gụọ PDF ma ọ bụ àgwà nke akwụkwọ ahụ nwere ike ileghara anya maka obere faịlụ. N'isiokwu a, ị ga-amụta otú ị ga-esi mee ka ịgbanwuo JPEG na AutoCAD.
Otu esi eji A360 Viewer
Dị ka anyị degarịrị na isiokwu ndị bu ụzọ, a pụrụ ịgụ usoro Ọdịnaya nke Avtokad site na iji mmemme ndị ọzọ. Onye ọrụ ahụ adịghị mkpa ka ịnweta AutoCAD na kọmputa iji mepee ma lelee eserese e kere na usoro a. Onye na-emepụta AutoCAD Autodesk na-enye ndị ọrụ ọrụ n'efu maka nlele eserese - A360 Viewer.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ ịrụ ọrụ na AutoCAD site na iji usoro ndabere dị omimi, ebe nke a enwechaghị mmetụta na ọhụụ. Ebere ndabara a site na ndabara. Otú ọ dị, n'oge ọrụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji gbanwee ya ka ọ bụrụ ìhè, dịka ọmụmaatụ, ka iji gosipụtara eserese ngosi.
Ejiri ọkụ na AutoCAD
Iji ụzọ mkpirisi na ịbịaru mmemme ị nwere ike ịrụpụta ọsọ ọsọ ọsọ. Na nke a, AutoCAD abụghị otu. Ịme ihe osise site na iji hotkeys na-aghọ ihe omimi ma rụọ ọrụ nke ọma. N'isiokwu a, anyị ga-atụle njikọta nke igodo dị ọkụ, yana usoro nke ọkwa ha na AutoCAD.
Esi ewepu ihe proxy na AutoCAD
Ihe nnọchiteanya zoro na AutoCAD na-ese ihe ndị e kere na ngwa ịbịaru ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị abanye n'ime AutoCAD site na mmemme ndị ọzọ. N'ụzọ dị mwute, ihe nnọchiteanya nke na-emekarị nsogbu maka ọrụ AutoCAD. A pụghị iji ha depụtaghachi ya, edeghị ya, nwee usoro dị mgbagwoju anya, na-ewe ọtụtụ ohere diski ma jiri nnukwu RAM buru ibu.
Otu esi emepụta etiti na AutoCAD
Okpokoro bụ ihe dị mkpa nke mpempe akwụkwọ nke ịbịaru ọrụ. Ụdị na mpempe akwụkwọ ahụ na-achịkwa usoro nke usoro dị n'otu maka akwụkwọ eji emepụta (ESKD). Ebumnuche bụ isi nke etiti bụ ịnweta data na eserese (aha, ọnụ ọgụgụ, ndị na-eme ihe, ndetu na ozi ndị ọzọ). Na nkuzi a, anyị ga-ele anya otú e si emepụta etiti mgbe ị na-abanye na AutoCAD.
Esi tinye fonti na AutoCAD
Mgbe ị na-abanye na AutoCAD, ọ nwere ike ịdị mkpa iji ụdị dị iche iche. Ịmepụta ihe ederede, onye ọrụ agaghị enwe ike ịchọta ndepụta ọdịda na akara, nke maara ederede ederede. Kedu nsogbu? Na mmemme a, enwere otu nuance, ebe ị ghọtara na, ị nwere ike ịgbakwunye ihe ọ bụla na njiri gị.
Njehie 1606 mgbe ị na-etinye AutoCAD. Esi edozi
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, mgbe ị na-etinye AutoCAD, njehie nrụnye na-apụta na-enye ozi ahụ: "Error 1606 Enweghị ike ịnweta netwọk na netwọk Autodesk". N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịchọta otú e si edozi nsogbu a. Otu esi emezi njehie 1606 mgbe ị na-etinye AutoCAD tupu ịwụnye, jide n'aka na ị na-agba ọsọ na onye nchịkwa dịka onye nchịkwa.
Otu esi eme ka hatching na AutoCAD
A na-etinye Hatching na ịbịaru mgbe niile. Enweghị ọrịa strok, ị gaghị enwe ike igosi ihe osise ahụ ma ọ bụ ihe ederede. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi eme ka hatching na AutoCAD. Otu esi eme ka hatching na AutoCAD Gụọ kwa: Otu esi emejupụta AutoCAD 1.
Otu esi ejikọta ahihia na AutoCAD
Nbudata na AutoCAD nwere mpaghara nke ederede nke kwesiri idezi n'oge ọrụ. Maka ụfọdụ akụkụ dị mgbagwoju anya, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji jikọta usoro ha niile n'ime otu ihe iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịhapụ ma gbanwee ha. Na nkuzi a ị ga-amụta ụzọ isi jikọta akara nke otu ihe. Otu esi ejikọta ahiri na AutoCAD Tupu ịmalite ịmekọrịta usoro, ọ dị mma ịchọrọ na nanị "polylines" nke nwere isi nke kọntaktị nwere ike isonyere (ọ bụghị njikọta!
Otu esi etinye ihe oyiyi na AutoCAD
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ịbịaru mmemme, ọ na-adịkarị mkpa itinye onyinyo raster n'ọhịa ọrụ. Enwere ike iji foto a mee ihe maka ihe a mapụtara ma ọ bụ iji mezuo nkọwa nke ịbịaru. O di nwute, na AutoCAD ị gaghị etinye foto site na ịdọrọ site na windo na windo, dịka o kwere omume na mmemme ndị ọzọ.
Ihe osise na-abanye na AutoCAD
Ihe odide Digitizing na-agụnye ịgbanye ihe osise ọ bụla a na-ede na akwụkwọ na usoro kọmputa. Ịrụ ọrụ na ịzụlite bụ ihe a na-ewu ewu n'oge ugbu a na-emelite ebe nchekwa nke ọtụtụ òtù nhazi, ihe eji emepụta na ụlọ ahịa na-achọpụta ihe, bụ nke dị mkpa maka ụlọ ọrụ kọmputa nke ọrụ ha.
Esi nyegharịa mpempe akwụkwọ na AutoCAD
Na usoro nke na-arụ ọrụ na ịbịaru ihe omume AutoCAD, a na-eji ọtụtụ ihe eji eme ihe. Mgbe ị na-ese, ị nwere ike ịnyegharị ụfọdụ blocks. Iji ngwa nhazi ederede, ị pụghị ịgbanwe aha ya, ya mere, ị denye akwụkwọ nwere ike iyi ihe siri ike. Na nkuzi nkuzi nke oge a, anyị ga-egosi otú ị ga-esi denye aha na AutoCAD.
Na-ese onyinyo na AutoCAD
Ihe oyiyi abanye na AutoCAD anaghị achọrọ mgbe niile n'ozuzu ha - ọ nwere ike ịchọrọ naanị obere mpaghara ọrụ ha. Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu foto nwere ike iwepụ akụkụ dị mkpa nke eserese. Onye ọrụ ahụ na-eche eziokwu ahụ ihu na ọ dị mkpa ka onyinyo ahụ dakwasị, ma ọ bụ, dịkwuo ntakịrị, na-ada.
Otu esi abanye na AutoCAD
Igosipụta eserese na scales dị iche iche bụ ọrụ dị mkpa nke usoro mmemme ahụ nwere maka ịmepụta. Nke a na-enye gị ohere igosipụta ihe ndị a chọrọ maka nzube dị iche iche na iji mpempe akwụkwọ rụọ ọrụ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi agbanwe agbanwe ntaneti na ihe ndị e dere na AutoCAD.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na toolbar adịghị na AutoCAD?
Akpa ngwaọrụ AutoCAD, nke a na-akpọkwa rịbọn ahụ, bụ "obi" n'ezie nke usoro ihe omume ahụ, n'ihi ya, ọnwụ ya site na ihuenyo maka ihe ọ bụla nwere ike ịkwụsị ọrụ ahụ kpamkpam. Isiokwu a ga-akọwa otú ị ga-esi weghachi ngwá ọrụ na AutoCAD. Na-agụ na ọnụ ụzọ anyị: Otu esi eji AutoCAD Olee otú iji weghachite ngwá ọrụ na AutoCAD 1.
Njehie na-eziga iwu na ngwa na AutoCAD. Esi edozi.
Njehie mgbe ị na-eziga iwu na ngwa mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-amalite AutoCAD. Ihe kpatara ya nwere ike ịdị nnọọ iche - site na ibugharị nke Temp na nchekwa ma na-ejedebe na njehie na ndekọ na sistemụ arụmọrụ. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịchọta otú ị ga-esi wepu njehie a. Otu esi agbazi njehie mgbe ị na-eziga iwu na ngwa na AutoCAD Mbụ, gaa C: Onye ọrụ AppData Local Temp na ehichapụ faịlụ niile na-enweghị isi na-eme ka usoro ahụ kwụsị.
Otu esi emeju na AutoCAD
A na-ejikarị ihe eji eme ihe na eserese iji mee ka ha dịkwuo mma ma gosipụta ya. Site n'enyemaka nke nju, a na-ebute ihe onwunwe dị iche iche ma ọ bụ ihe ụfọdụ nke eserese a pụta ìhè. Na ihe omumu a anyi ga aghota otua esi mejuputa ma dezie ya na AutoCAD. Otu esi emejuputa AutoCAD Duputa 1.
Esi tinye faịlụ PDF na AutoCAD
Mgbe ị na-ese ihe osise, onye injinia na-ezutekarị akwụkwọ nke ụdị dị iche iche na ya. A na-eji data dị na PDF mee ihe dị ka akụkụ na njikọ maka ịbịaru ihe ọhụrụ, yana ihe edoziri emezi na mpempe akwụkwọ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi tinye ihe PDF na ihe osise AutoCAD.
https://termotools.com ig.termotools.com © Autocad 2020